Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Pennsylvania 2022
Liiska iyo faahfaahinta iskuulada caafimaadka ee ugufiican Pennsylvania ayaa lagu bixiyay boostada bartan si ay kaaga caawiso fududeynta gelitaankaaga iskuulada caafimaadka ee gobolka.
Haddii aad degan tahay gobolka Pennsylvania ama aad ka fekereyso inaad halkaas u aado daraasado caafimaad, markaa waxaad ka heli doontaa qodobkan mid aad waxtar ugu leh dalabkaaga gelitaanka dugsiyada caafimaadka ee halkaas ku yaal. Sidoo kale, haddii aadan ka fikirin, waad bilaabi kartaa inaad hadda sameyso, maadaama Pennsylvania ay leedahay qaar ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Mareykanka oo dammaanad ka ah inay ku siiso waxbarasho caafimaad oo heer caalami ah.
Waxaan dib u eegi doonnaa dhamaan iskuulada caafimaadka ee Pennsylvania halkaan si aad u doorato midka adiga kugu haboon laakiin kahor intaadan guda galin, fiiri su'aalaha hoose.
Waa imisa iskuulka caafimaadka ee Pennsylvania?
Pennsylvania ma leedahay iskuulo caafimaad oo wanaagsan?
Immisa dugsi caafimaad ayaa ku yaal Pennsylvania?
Pennsylvania ma leedahay iskuul caafimaad oo dawladeed?
7 Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Pennsylvania
1. Dugsiga Caafimaadka ee Perelman
2. Dugsiga Caafimaadka ee Lewis Katz
3. Jaamacadda Pittsburgh School of Medicine
5. Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Drexel
7. Dugsiga Caafimaadka ee Geisinger Commonwealth
5 Iskuullada Caafimaadka ee Ugu Qiimaha Badan Pennsylvania
# 1 Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Drexel
# 2 Jaamacadda Macbadka
# 3 Pennsylvania State University - Kuliyada Caafimaadka
# 4 Jaamacadda Pittsburg
# 5 Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Pennsylvania State
Iskuulada Biilka ee Caafimaadka iyo Koodh bixinta ee Pennsylvania
Liiska dhammaan Iskuulada Caafimaadka ee Pennsylvania
Kharashka iskuulka caafimaadka ee Pennsylvania wuxuu ku kala duwan yahay qaybta caafimaadka aad rabto inaad gasho, nooca ardayga aad tahay (haddii aad tahay arday caalami ah ama mid gudaha ah), iyo sidoo kale dugsiga caafimaadka.
Si kastaba ha noqotee, kharashka iskuulka caafimaadka ee Pennsylvania wuxuu u dhexeeyaa $ 52,049 iyo $ 59,910 oo loogu talagalay ardayda gudaha ama kuwa gobolka ah halka ardayda caalamiga ama kuwa ka baxsan gobolka, ay u dhaxeyso $ 55,121 iyo $ 70,212 sanadkii.
Pennsylvania waxay hubaal tahay inay leedahay iskuulo caafimaad oo wanaagsan oo ku siin doona khibrad caafimaad oo aad u tababaran isla markaana ku tababbarta inaad noqoto xirfadle caafimaad oo tayo leh. Qaar ka mid ah iskuulada caafimaadka waxaa ka mid ah Drexel University College of Medicine, Sidney Kimmel Medical College, Lewis Katz School of Medicine, iyo kuwo kale.
Pennsylvania waxaa ku yaal 14 dugsi caafimaad
Haa, Pennsylvania waxay leedahay iskuul caafimaad - Penn State College of Medicine.
Anaga oo si cad u qeexan, waa waqtigii aan u gudbi lahayn mawduuca ugu muhiimsan ...
Kuwa soo socdaa waa iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Pennsylvania iyo faahfaahintooda;
Dugsiga Caafimaadka ee Perelman, oo loo yaqaan 'Penn Med', waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Pennsylvania - oo ah iskuulka Ivy League - iyo mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Pennsylvania, haddii uusan ahayn kan ugu fiican gobolka. Iskuulka caafimaadka waxaa la aasaasay 1765 waana iskuulka ugu da'da weyn caafimaadka ee Mareykanka.
Penn Med waxay bixisaa waxbarasho caafimaad oo fara badan sida Daryeelka Halis, Neurosurgery, Radiation Oncology, Dermatology, Pediatrics, Medical Ethics, and Health Policy, Suuxdinta, Ophthalmology, Qalliinka Lafaha, Maskaxda, Dhalmada iyo Haweenka, Farmasiga, iyo inbadan. Koorsooyinkan waxaa lagu dhigaa mid ka mid ah afarta cisbitaal ee aasaasiga ah ee wax lagu barto ee dugsiga: Isbitaalka Jaamacadda Pennsylvania, Xarunta Caafimaadka ee Penn Presbyterian, Isbitaalka Pennsylvania, iyo Isbitaalka Carruurta ee Philadelphia.
website rasmiga ah
Dugsiga Caafimaadka ee Lewis Katz waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Temple, oo la aasaasay sanadkii 1901 waxaana laga aqoonsan yahay iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Pennsylvania sababta oo ah guulaha badan ee ay gaareen sida inay yihiin kuwa ugu horeeya ee ka saara HIV unugyada aadanaha qiimeynta iyo guulaha kale.
Kulliyadda caafimaadka waxay bixisaa barnaamijyo ku saabsan MD, MA, barnaamijyo wadajir ah (MD / MA, MD / Ph.D.), Kaaliyaha Dhakhtarka, Dib-u-baccalaureate, iyo Barnaamijka Daawada Qisada. Ardayda waxaa loo fidiyaa waxbarasho khibrad-gacmeed iyada oo loo marayo mid ka mid ah cosbitaalada badan ee la shaqeeya dugsiga Katz.
Caan ahaan loo yaqaan 'Pitt Med' oo qaran ahaan loo aqoonsan yahay ku-guuleysiga ay ku sameysay cilmi-baarista biomedical, waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee Pennsylvania. Wada shaqeynta Jaamacadda Pittsburgh Medical Center, ardaydu waxay awoodaan inay helaan xirfado balaaran iyo aqoon dhaqamada casriga ee casriga ah iyo adeegsiga tignoolajiyada goynta ku dhisan ee adeegsiga caafimaadka.
Sida iskuulada kale ee caafimaadka ee liiskan ku yaal, Jaamacadda Pittsburgh, Iskuulka Caafimaadka ayaa ah mid aad u tartan badan, oo u baahan celcelis ahaan dhibcaha MCAT ee 517 oo leh celcelis ahaan GPA ee 3.86. Iskuulku wuxuu daboolayaa labadaba barnaamij caafimaad, oo bixiya dhakhtarka daawada, iyo barnaamijyada qalin-jabinta, oo bixiya dhakhtarka falsafada iyo shahaadada mastarka ee aagag badan oo sayniska bayoolajiga ah, cilmi-baarista caafimaadka, waxbarashada caafimaadka, iyo macluumaadka caafimaadka.
Waxaa la aasaasay 1824 waana mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu da'da weyn Mareykanka, Sidney Kimmel Medical College waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Thomas Jefferson. Iyada oo barnaamijkeeda caafimaad ee dhowaan la qaabeeyey, oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha daryeelka caafimaad ee casriga ah, iyada oo ardayda lagu qalabeeyo aasaaska daawada ka dib iyaga oo siinaya waxbarasho wax ku ool ah oo ku saabsan barista isbitaalada si ay si buuxda u xoojiyaan xirfadahooda.
Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay iskuulkii ugu horreeyay ee caafimaad ee Mareykanka iyo sidoo kale kulleejkii ugu horreeyay ee homeopathy-ka ee waddanka, Drexel University College of Medicine waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee Pennsylvania. Waxaa la aasaasay 1848 waxayna bixisaa waxbarasho caafimaad oo tayo leh oo loogu talagalay in lagu tababaro dhakhaatiirta mustaqbalka sayniska iyo farshaxanka daawada. Ardayda caafimaadka ee Drexel waxay bartaan isku-darka tikniyoolajiyadda heerka ugu sareysa ee naxariista ee ku-dhaqanka daaweynta.
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Drexel ma noqon karto mid u tartanta sida iskuulada kale ee caafimaadka ee liiskan ku yaal maadaama ay tahay dugsiga labaad ee ugu badan ee laga adeegsado Maraykanka.
Waxaa la aasaasay 1992 oo ah iskuul qalin jabin oo gaar loo leeyahay oo ah daawo, ilko, iyo farmashiye shahaadooyin ka bixinaya daawada osteopathic (DO), farmashiyaha (Farmashiistaha), iyo ilkaha (DMD), iyo sidoo kale shahaadada mastarka ee Maamulka Adeegyada Caafimaadka, Sayniska Biyomediga, iyo Caafimaadka Waxbarasho. Iskuulka caafimaadka wuxuu bixiyaa barnaamij farmashiye ah oo seddex sano ah oo la dedejiyay oo dalka ka jira iyo barnaamijka waxbarashada fog.
In ka badan 2,200 oo ka diiwaangashan ardayda caafimaadka, Kuliyada Osteopathic Medicine ee LECOM waa iskuulka caafimaadka ugu weyn Mareykanka. Tartanku halkan kuma sarreeyo sidoo kale waxaad u baahan kartaa inaad ka fiirsato codsi halkan ah si aad u hesho aqoon iyo xirfado caafimaad oo aad u sarreeya.
Kani waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka gaarka loo leeyahay ee Pennsylvania, waxaa la aasaasay 2008 wuxuuna ku xiran yahay Nidaamka Caafimaadka Geisinger wuxuuna ku yaal waqooyi-bari iyo waqooyiga-bartamaha Pennsylvania. Iskuulku wuxuu bixiyaa qaab ku saleysan bulshada oo ku saabsan waxbarashada caafimaadka wuxuuna sidoo kale bixiyaa Barnaamijka Dhakhtarka Caafimaadka (MD) iyo Barnaamijka Sayniska Biyomediga (MBS).
Gelitaanka halkan maahan mid tartan la leh shuruudaha MCAT ee 511 iyo celceliska GPA ee 3.66.
Kuwani waa iskuulada caafimaadka ee ugufiican Pennsylvania tanina waxay sidoo kale macnaheedu tahay inay noqon lahaayeen kuwa tartan iyo qiimo badan. Sikastaba, waxaan diyaariyey liistada iskuulada caafimaadka ee ugu raqiisan Pennsylvania taas oo adiga kuu macquul ah. Sii wad akhriska!
Kuwa soo socdaa waa iskuulada caafimaadka ee ugu raqiisan Pennsylvania oo ku qoran liis gaar ah:
Liistadeena ugu sareysa ee iskuulada caafimaadka ee ugu raqiisan Pennsylvania waa Jaamacadda Drexel, Kuliyada Caafimaadka, sidoo kale waxaa kor lagu taxay oo ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu fiican Pennsylvania. Waa wax lala yaabo in khidmadda wax lagu barto ee iskuulka noocan oo kale ah ay runtii tahay mid raqiis ah oo aan intaas oo keliya ahayn, sidoo kale waa dugsiga labaad ee ugu badan ee laga isticmaalo waddanka.
Qiyaasta kharashka waxbarashada sanadkiiba ee dugsiga Drexel med waa $ 30,000.
Farqiga ujrooyinka waxbarida ee udhaxeeya Temple iyo Drexel ayaa aad u weyn ama waxay umuuqataa in Drexel runtii runtiisu jaban tahay oo samaynta Macbadka ay umuuqato mid foolxun. Si kastaba ha noqotee, marka la barbardhigo iskuulada kale ee caafimaadka ee dalka waxaad arki laheyd in qiimaha Jaamacadda Temple uusan aheyn wax laga xumaado.
Dugsiga Caafimaadka ee Lewis Katz waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Temple, oo halkan, deggeneyaasha, taasi waa, deganayaasha joogtada ah iyo muwaadiniinta Pennsylvania waxay bixiyaan qiyaastii $ 55,000 sanadkii sanadkii khidmadaha waxbarashada. Halka Dadka aan deegaanka ahayn iyo ardayda caalamiga ahi bixiyaan wadarta $ 58,000 sanadkii.
Waxay u egtahay halkan halkan khidmadaha wax lagu barto waxay ku jiri doonaan 50ks iyo wixii ka sareeya oo daacad ah, wali way jaban yihiin. Kuwa kale waxay u dhexeeyaan 80ks ilaa 100ks, sidaa darteed, tani wali waa nooc ka jaban. Kharashka waxbarashada ee ardayda caafimaadka halkan waa $ 52,000 sanadkii.
Pitt Med, sida dugsiga caafimaadka halkan loogu yaqaan caan, sidoo kale waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan uguna raqiisan Pennsylvania. Sanadkiiba, ardayda caafimaadka ee deganayaasha ah waxay bixiyaan kharash lagu qiyaasay $ 59,000 kuwa aan deegaanka ahaynna waxay bixiyaan $ 62,000.
Kulliyadda Caafimaadka ee Penn State waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu raqiisan Pennsylvania magaalada guud ahaan, taas oo u oggolaaneysa ardayda ku nool gobolka iyo dibaddaba inay bixiyaan isla kharashka waxbarashada. Kharashka waxbarashada halkan waa $ 50,534 sanadkii.
Marka, kuwani waa iskuulada caafimaadka ee ugu raqiisan Pennsylvania, i aamin, ma ahan kuwo qaali ah sida iskuulada kale ee caafimaadka ugu sareeya hadana wali waxay ku siinayaan waxbarasho caafimaad oo tayo leh qaybtaada takhasuska leh.
Bixinta iyo koodh gareynta caafimaadku waa habka lagu garto ciladaha, tijaabooyinka caafimaadka, daaweynta, iyo habraacyada laga helo dukumiintiyada bukaan socodka ka dibna loo qoro xogtan bukaan-socodka koodhadh la jaangooyay si loogu diro dawladda iyo ganacsatada bixiya kharashka dhakhtarka.
Biilka iyo barnaamijka koodhka caafimaadka waxaa lagu dhammaystiri karaa afar sano adoo kasbanaya shahaadada bachelorka ama sagaal bilood illaa hal sano haddii aad go'aansato inaad qaadatid shahaadada ama barnaamijka diblooma ee koorsada. Waxa kale oo jira barnaamij shahaadada jaamacadeed ah oo ku saabsan koorsada caafimaadka iyo biilasha taas oo caadiyan qaadata 2 sano in la dhammaystiro.
Koodhadhka caafimaadku wuxuu la shaqeeyaa dhakhaatiir ruqsad haysta waxayna xulasho weyn u noqon karaan shakhsiyaadka aan ka dhigi karin dugsiga caafimaadka. Xirfadan waxaad ku kasban kartaa lacag aad u tiro badan sanadkiiba, oo u dhaxeysa $ 42,000 ilaa $ 64,900, shahaadadaada oo sareyso, mushaharkaaga ayaa sareeya, marka, waxaad ubaahantahay inaad kuhesho shahaadada bachelorka ee barnaamijka oo aad kasbato waxbadan.
Hoos waxaa ku yaal liiska isku-darka ee biilasha caafimaadka iyo iskuulada codeynta ee Pennsylvania oo laga yaabo inay xiiseynayaan inaad dalbato.
Kulliyadda Farsamada ee Pennsylvania
Machadka Xirfadaha Kaplan
Machadka Farsamada ee Keystone
Kuliyada Bulshada ee Degmada Luzerne
Kulliyadaha Bulshada ee Montgomery
Machadka Farsamada ee Pittsburgh
Kulliyadda Bulshada ee Westmoreland
Machadka Farsamada ee Laurel
Kulliyada Bulshada ee Lehigh Carbon
Machadka Xarumaha Caafimaadka
Kuliyada Bulshada ee Degmada Butler
Kulliyadda Bulshada Degmada Bucks
Kulliyadaha Bulshada ee Degmada Delaware
Machadka Farsamada Berks
Iskuulka Ganacsiga & Teknolojiyada ee McCann
Iskuulka Ganacsiga ee Lansdale
Kulliyadaha Bulshada ee Degmada Northampton
Jaamacadda Community College
Qaar ka mid ah hay'adahaani waxay bixiyaan barashada khadka tooska ah iyo waxbarashada fog ee biilasha caafimaadka iyo barnaamijyada sireed. Waad go'aansan kartaa inaad raacdo diblooma, shahaado, shahaadada jaamacadeed, ama shahaadada bachelorka ee barnaamijka, hadba kan adiga kuu fiican.
Kahor codsashada barnaamijkan waa inaad dhammaysatay dugsiga sare oo aad kasbatay dibloomadaada ama GED koorsada sayniska sida bayoolaji, kimistariga, fiisikiska, iyo mararka qaarkood xisaabta. Si aad u noqotid sharci-yaqaan sharciyeysan iyo cod-bixiye, waa inaad qaadataa imtixaan qiimeyn doona xirfaddaada iyo aqoonta aad u leedahay koorsada, haddii aad hesho dhibco lagu qanco markaa waxaad kasban kartaa liisankaaga.
Dhammaan iskuulada caafimaadka ee Pennsylvania waa:
Iskuulka Caafimaadka ee Perelman
Iskuulka Atlantic ee Cudurka Osteopathy
Jaamacadda Drexel University College of Medicine
Dugsiga Caafimaadka ee Geisinger Commonwealth
Kuliyada Caafimaadka ee korantada ee Pennsylvania
Kulliyadda Caafimaadka ee Jefferson
Iskuulka Caafimaadka ee Lewis Katz
Jaamacadda Pittsburgh School of Medicine
Kulliyadda Caafimaadka ee Philadelphia ee Osteopathic Medicine
Philadelphia Iskuulka Anatomy
Kuliyadda Lake Erie ee Osteopathic Medicine
Jaamacadda Caafimaadka ee Penn
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Penn State
Kuwani waa dhammaan iskuulada caafimaadka ee Pennsylvania, iyo haddii aad rabto wax intaa ka badan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hubiso talooyinka hoose.
10ka Dugsi ee Caafimaadka ee ugu Fiican Philadelphia | Bilaash Oo La Siiyo
25 + Barnaamijyada Kaaliyaha Caafimaadka ee Aqoonsiga ee La Aqoonsan yahay ee Shahaadada leh
24 Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fudud ee lagu galo UK, US, Canada, Australia, Kuwa kale
iskuulada caafimaadka ee ugufiican Pennsylvaniaiskuulada caafimaadka ee ugu raqiisan Pennsylvanialiiska dhammaan iskuulada caafimaadka ee Pennsylvaniaiskuulada codeynta caafimaadka iyo biilasha ee Pennsylvaniaiskuulada caafimaadka ee Pennsylvania
Previous Post:16 Koorsooyin onlayn ah oo bilaash ah oo Koonfur Afrika ah oo wata shahaadooyin
Post Next:15 Meelood Si Loogu Helo Imtixaan Ingiriisiga Ah Oo Jawaabo PDF ah